यसलाई पहिले pregnancies एक एकान्त जीवन नेतृत्व गर्न महिला बल, वा धेरै गतिविधिहरु र मोजमस्ती त्याग्न आफूलाई सीमित। छैन त लामो अघि XIX-XX शताब्दीयौंदेखि मा।, लामो र उभडा पेट लगभग निश्चित उनको नजरबन्दमा ग्यारेन्टी। खुसीको कुरा, यो सबै विगतका कुरा छ। र आज, परिवार सुशील तरिकामा हुन। चमकदार पत्रिका को आवरण मा हेर। आज वा भोलि अप तडक सेलिब्रेटीहरू संग प्राप्त कोठा सबैभन्दा हामी प्रसूति अस्पताल जानेछन्।
अब गर्भवती महिला उपलब्ध तिनीहरूलाई अनुमति दिने, लगभग सबैलाई छन् स्वास्थ्य। र के पहिले निषेध गरिएको थियो धेरै, आज डाक्टर द्वारा निर्धारित छ। उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई लागि सबैभन्दा उपयोगी खेल पौडिरहेका छ। महासागर, समुद्र, ताल, नदी र तलैया - एक खुशी सधैं उपलब्ध र एकै समयमा राम्रो शुल्क। यो एक Swimsuit सहित यस्तो बाहिरी गतिविधिहरु लागि सही लुगा चयन गर्न मात्र आवश्यक छ।
सबै को पहिलो, सूर्य तीव्रता को विकल्प संग correlate। तपाईं समुद्र तट मा sunbathe गएर र गर्मी को उचाइ मा खुला पानी मा पौडी खेल्न छन् भने, वस्त्र यूवी रेज देखि सुरक्षा को एक उच्च डिग्री संग चयन र पूर्ण भएको पेट कवर मोडेल मा रोक्न गर्नुपर्छ।
गर्भवती महिलाका लागि Swimsuits: प्रकार
बिकनी - छ अलग Swimsuit। सधैं लाइन को एक उच्च फिर्ता संग कम - गर्भवती भएको smelting लागि मोडेल।
Monokini - एक Swimsuit फ्यूज। गर्भवती महिलाका लागि यस्तो मोडेल भविष्यमा राम्ररी भएको छैन एक कट वा कहिल्यै वृद्धि पेट गर्न ऊतक को एक राम्रो लोच लागि पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध छन्।
Tankini - छुट्टै स्नान सूट, धेरै महिला, सबै भन्दा व्यावहारिक र सुविधाजनक अनुसार। यो लाइन फिर्ता देखावटी छन् बिकनी मा जस्तै जो, सबै भन्दा माथि जो या त डिजाइन, जस्तै, कारण प्रत्येक पक्षमा Folds, वा कारण उच्च लोच ऊतक गर्न सँगै expectant आमा को वृद्धि मात्रा संग र कम heats को "बढ्छ", को हुन्छन् आधा।
महिला को प्राकृतिक परिसंचरण बाधा छैन ताकि कुनै पनि अवस्थामा, गर्भवती महिला लागि swimsuits उच्च गुणवत्ता लोचदार सामाग्री देखि, सिलना गर्नुपर्छ। आवश्यक छैन, तर यो बेहतर को ब्रा को छाती मा कहिल्यै वृद्धि मात्रा समर्थन गर्न व्यापक पट्टियाँ छ भन्ने छ।
आज गर्भवती महिला लागि Swimsuits रंग को एक महान विविधता छ। र, एक महिला को लागि एक रोचक स्थिति सबै को पहिलो, आनन्द, रूप पनि उज्ज्वल रंग र हँसिलो ढाँचाको एकदम उपयुक्त छन्। मुख्य कुरा तिनीहरूले राम्रो मुड पूरा र धेरै Mistress आनन्द थिए।
कम्पनीहरु जो सी समुद्र तट लागि लुगा र विशेष मा, पौडी खेल्न, धेरै, र आफ्नो उत्पादन को दायरा धेरै विविध छ। गर्भवती महिलाका लागि Swimsuits लगभग सबै प्रमुख निर्माता को संग्रह मा उपस्थित छन्, त्यसैले तपाईं को लागि, तपाईं सधैं आफ्नो आफ्नै स्वाद एक मोडेल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सोध्नुहोस्।
सबै महिला एक बच्चा को जन्म लागि - एउटा महत्त्वपूर्ण घटना, र यो आवश्यक responsibly र गम्भीर यसलाई दृष्टिकोण छ। उपलब्ध-र सबै भन्दा राम्रो-बिक्री उत्पादनहरु मा विक्रेता परामर्श गर्न expectant आमा को लागि सबै बेच्छ जो स्टोर, भ्रमण गर्न, र बडा दिन पहिले सम्भव लामो। यो पनि, तपाईं आवश्यकता गर्न भन्दा संभावना किन्छ भनेर पछि।
र रुचाउने लागि ब्रा, पक्कै आवश्यक खरिद सूची मा उच्च हुनुपर्छ। उहाँले पहिलो दिन आवश्यक हुनेछ लागि 1-2 हप्तासम्म, अपेक्षित जन्म अघि किन्न लायक छ। दोस्रो मा - किनभने यस्ता कुराहरू संकुचित प्रथम स्थान सुविधा र व्यावहारिकता र सौन्दर्य हुनुपर्छ मा केन्द्रित छन् यसको आवश्यकताहरु, पारंपरिक महिला ब्रा लागू गर्ने ती फरक छन्। अनुभव यसलाई व्यापक समायोज्य पट्टियाँ र अलग गर्न सकिने कप लागि राम्रो प्राकृतिक कपडे बनेको मोडेल, गर्न नजिकबाट हेर्न आवश्यक छ भनेर देखाउँछ। गर्नुपर्छ धेरै टुक्रा किन्न, प्राथमिकताको 1-2 भन्दा यो अघि थियो ठूलो आकार।
सानो, बस जन्म मानिस जीवन ल्याउँछ पहिलो पटक भर्खरै minted आमा र बुबा मात्र तिनीहरूलाई व्यस्त छन् भनी धेरै समस्या वरिपरि मानिसहरू। त्यसैले, यो घरेलू मामलामा कम से कम यो घटनाको लागि सकेसम्म धेरै तयार अर्थमा बनाउँछ। साथै, तपाईंले सबै चाँडै आवश्यक रूपमा, स्वास्थ्य, पौडी, बाँकी प्रशस्त बलियो र धैर्य stock अप।
आकार पुरुषहरु जीन्स अनलाइन किनमेल छिटो र सजिलो निर्धारण!
Tracksuits नाइके - सधैं स्टाइलिश र व्यावहारिक
सही काँध को चौडाई कसरी मापन गर्ने?
स्टाइलिश एडिडास छोटकरीमा - सजिलो र सुविधाजनक
Lipno मा सेन्ट निकोलस को पुरानो चर्च। निर्माण को इतिहास
Junipers रोग: प्रकार र तिनीहरूलाई कसरी लड्न
बाल हानि विरुद्ध शैम्पू - कि वा खरिद गर्न?
वसन्त हुँदा रूखहरू रोपेर गर्न? वसन्त मा रूखहरू कसरी रोपेर गर्न?